Home EUROPEAN FOOTBALL STORIES Ndị na-egwu egwuregwu bọọlụ Spanish Marcos Alonso na-eto eto Akụkọ nke ọzọ na-emeghe akụkọ ihe omuma
LB na-egosi Full Story of a Left Back Genius kasị mara amara site na aha njirimara; 'Mkpuru'. Anyị Marcos Alonso Child Akụkọ ọzọ na-enweghị akwụkwọ akụkọ Eziokwu na-ewetara gị ozi zuru oke nke ihe ndị a ma ama site na nwata ruo n'oge. Nyocha a na-agụnye akụkọ ndụ ya tupu ama ama ya, ndụ ezinụlọ ya na ọtụtụ ndị na-amaghị ihe banyere ya.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ikike ya ma ole na ole tụlee ihe Marcos Alonso Biography nke na-adọrọ mmasị. Ugbu a n'enweghi adieu ọzọ, ka anyi bido.
Marcos Alonso Nwa Akụkọ Akụkọ na -Ndụ mbido
A mụrụ Marcos Alonso n'ụbọchị 28th nke December 1990 na Marid, Spain. A mụrụ ya Capricorn.
O batara n'ime ụwa site n'aka ndị nne na nna ya hụrụ n'anya bụ ndị na-aga site na Mr na Mrs Marcos Alonso Peña.
Dịka Juan Mata na Alvaro Morata, Marcos bụ nwa Madrid. Nye obere Marcos, inye bọlbụ mmalite dị mfe. Ọ malitere igwu egwu football site na mgbe ọ malitere ịgba.
Uru ọzọ bụ na Marcos si na bọlbụ na-akpọ ezinụlọ ya na nna ya na nna nna ya ma na-egwuri egwu n'egwuregwu ọkachamara n'ogo dị elu. Ụzọ a dị mkpa maka ya ka ọ bụrụ egwuregwu nke ọma site na nwata.
Mgbe ọ dị obere, ọ malitere ịkpọ Alcobendas bụ obere ìgwè (ụlọ oriri na-edozi ahụ maka Real Madrid) n'ógbè ahụ Marcos toro. Nne na nna ya ji nlezianya mee ka nwa ya nwee mmụta nke ukwuu ma ọ bụ ya mere o ji họpụta Alcobendas dịka onye mbụ ya na-eto eto, n'ihi na ọ nọ nso n'ụlọ ezinaụlọ.
Akụkọ nke Marcos Alonso
Marcos Alonso bụ onye na-agba Atletico na-eto eto, anyị enweghịkwa obi abụọ na ọ hụrụ Atletico n'anya maka nna ya Marcos Alonso Peña Egwuru egwu maka ụlọ egwu mgbe Marcos ka bụ nwata.
Athletico Madrid na-enye ya otu ebe na agụmakwụkwọ ha niile maka mmetụta nna ya. N'inye nwa ya ohere na-adịgide adịgide na agụmakwụkwọ ha bụkwa ụzọ isi akwụ ụgwọ papa ya maka ọrụ ya na ụlọ ịgba.
Marcos Alonso na-eto eto na Athletico Madrid
Otú ọ dị, enwere nsogbu. Ebe ha na-azụ ihe dị nnọọ anya n'ebe obibi ya. Nna ya achọghị ka a kụziere ya akwụkwọ site na njem ndị ọzọ na-egwu maka egwuregwu ndị ntorobịa Atletico ka Alonso gbanwere ndị mmekọ ma sonye na ụlọ akwụkwọ mmuta na Real Madrid bụ nke dịkwuo n'ógbè ya. N'ebe ahụ, ọ malitere ọrụ ọzọ bara uru.
N'ọmụmụ ihe ntorobịa Real Madrid, Marcos na-aga n'ihu kwa afọ iji gosipụta n'akụkụ n'akụkụ ntorobịa ọ bụla.
Young Marcos Alonso na Real Madrid
Ọ bụ n'oge a ka o tolitere ka anyị mara Marcos Alonso taa.
Mgbe ọ nọ na Real Madrid, nwata ahụ na-egwuri egwu dị ka onye na-agụ nwa, nke ukwuu na-ewute nna ya na nna nna ya. Anyị ga-agwa gị ihe mere ha ji nwee nkụda mmụọ.
Obi abụọ adịghị ya na Madrid abụghị otu osisi mara maka ịzụlite ntorobịa dị ka ihe kacha mkpa. Okpukpo agaghi enwe ike iburu ebe Alonso noro ogo oge.
Mgbe ọ na-echere afọ, Manuel Pelligrini nyere ya ọdịdị mbụ ya na 2010 ndị isi nke Real Madrid. N'ụzọ dị mwute, a kpọpụtara ya na 89th nkeji megide Racing Santander. N'ụzọ dị mwute, ọ bụ nanị oge ole na ole ka ọ nọ na pitch na agba Real.
N'ịmara na ọ chọrọ ohere iji gosi onwe ya, Alonso ji obi ike hapụ Bernabeu maka Bolton nkịtị mgbe ya na otu ndị ntorobịa nke Madrid na-egwu naanị 1.
E webatara Marcos na ndị Bolton Wanderers n'oge okpomọkụ nke 2010 mgbe Owen Coyle hụrụ talent ya. Ọ na-eduga n'akụkụ ya na Cup Cup na Wembley.
Ọrụ nkwado Bolton Marcos Alonso
Nke a mere ka ndị dike gọọmenti Fiorentina jide ya. Ha nyere ya aka na Sunderland tupu ya alọghachi na Fiorentina bụ onye ji ya dị ka onye na-eme egwuregwu.
Marcos sonyeere Chelsea na 31st August 2016, nyefee ụbọchị ọ bụla mgbe Antonio Conte kwere nkwa ịchọta ya mgbe ọ gbasasịrị ya na Italia Serie A. Ọ bụ Chelsea na-enweta ọtụtụ ihe omuma akwụkwọ Real Madrid na Alonso. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme.
Marcos Alonso Nwa Akụkọ Akụkọ na -Ndụ mmekọrịta
O yiri ka Marco Alonso achọghị ka ndụ ya dị ka paparazzi.
Otú ọ dị, otu nwoke maara ihe kwuru otu oge, sị, "Na-echegbu onwe gị na Ntugharị gị". Marcos Alonso ahọrọwo amamihe dịka ọ dịkarịa ala maka oge ahụ site n'ilekwasị anya na ọrụ ịgba chaa chaa ya.
Ọ bụ Alonso ugbu a adịghị na nkwenye kwadoro ma ọ bụ na ọ na-ezo enyi ya nwanyị dị ka foto dị n'okpuru na-atụ aro ma ọ bụ mmekọrịta ya n'ezie mgbagwoju anya.
Marcos Alonso na enyi ya a sịrị
Otú ọ dị, i nwere ike ịtụkwasị obi Ndụ ndụ maka mmelite ozugbo ka Marcos Alonso na-emeghe.
Marcos Alonso Nwa Akụkọ Akụkọ na -Ndụ Ezinụlọ
Ọ dị mma ịsị na Alonso fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ na-enweghị ihe ọ bụla ọ na-eme ma ọ bụrụ na ọ na-akwado football.
N'ezie, O sitere na agbụrụ ndị na-agba egwu. Nna nna ya, Marcos Alonso Imaz (nke a na-akpọ "Marquitos"), meriri ọgbọ egwuregwu ise nke Europe na Alfredo Di Stefano na Ferenc Puskas maka akụkụ Real Madrid nke 1950s, na-eche na 1956 ikpeazụ.
Nna ya, Marcos Alonso Pena, kpere maka Atletico Madrid na Barcelona, ​​ghọọ onye ọkwọ ụgbọala kachasị ọnụ ahịa Spain mgbe ọ kwapụrụ isi obodo ahụ gaa Catalonia maka ego nke 150 nde pesetas na 1982. Ọ na-anọchi anya obodo ya na oge 22, karịsịa na-enyere ha aka n'ikpeazụ nke 1984 European Championship na France. Nna Alonso ghọkwara onye isi nke Athletico Madrid n'oge mgbasa ozi 2001 / 02.
Alonso Jr. na-eme ka ọ dịkwuo nso site n'igosi onyinyo nke ndị nna ya dị ebube.
Nne: Marcos Alonso nwetara aha ya site na nne ya bụ onye Juu. Nne ya bụ onye ikwu ezinụlọ Garza nke e gburu na Canary Islands. Ya mere nwata nwanyị nke nwanne nne ya nabatara gosipụtara mmekọrịta ya na ezinụlọ ahụ. Nke a na-akọwa ihe mere e ji kpọọ Marcos Alonso dị iche na ụmụnne ndị nwoke na ndị nwanyị Sosa. Na-agbaso ọdịnala nke ụmụ nwanyị ndị Juu na-edochi ezinụlọ ha dara ada ma ọ dịkarịa ala otu nwa si alụmdi na nwunye ha. Aha Alonso bụ nsụgharị Spanish nke aha Portuguese nke Alphonso.
Marcos Alonso Nwa Akụkọ Akụkọ na -Ụgbọala ụgbọala
N'ụzọ dị mwute, e jidere Marcos Alonso na 2nd nke May, 2011 mgbe o tinyechara aka na mberede ụgbọ ala na Madrid.
Ihe mberede ụgbọala nke Marcos Alonso - The Scene
Ọ bụ onye na-akwọ ụgbọ ala nke jikọtara mgbidi, na-egbu otu n'ime ndị njem, nwa nwanyị 19. Emere ya ule n'ime ihe mberede ahụ. A kọrọ na Marcos Alonso na-akwọ ụgbọala na 112.8 km / h (70 mph) na ọnọdụ mmiri na mpaghara 50 km / h (30 mph). Karịa nke a, na-aṅụ mmanya na-egbu ọbara nke 0.93 mg maka ọbara milliliter. Ihe si na ya pụta na-egosi na mmanya ya na-aba n'anya bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ okpukpu abụọ nke iwu Spanish.
Nwanyị ahụ anaghị eku ume mgbe a dọpụsịrị ya site na mkpochapu, ma kpọọ ya 30 nkeji mgbe ọ bịarutere n'ụlọ ọgwụ. Mmadụ atọ ndị ọzọ nọ n'ụgbọala ahụ, gụnyere enyi Alonso na onye ọlụlụ Madrid Real Madrid, bụ Jaime Navarro, bugara ndị ụlọ ọgwụ na-enwe mmerụ ndị e chere na ọ bụghị ndụ. E boro ya ebubo na ọ bụ igbu ọchụ.
Ọ ga-eche ihu ọnwa 21 n'ụlọ mkpọrọ. Otú ọ dị, a gbanwere ntaramahụhụ ya ka ọ bụrụ "61,000 mma" na ịkwọ ụgbọala nke afọ atọ na ọnwa anọ. Alonso amaola ya iwuchibido.
Marcos Alonso Nwa Akụkọ Akụkọ na -Nna ochie ya
Alonso mekwara enyi De Gea mgbe ha abụọ bụ ndị na-eto eto nke mba Spain na-eto eto ma na-esokwu nso na onye nchebe n'oge ya na Bolton, ya na ndị Spaniards abụọ na-ekiri otu ntụrụndụ yana ịchọta ụlọ oriri na ọṅụṅụ, ụlọ ahịa na ụlọ oriri na ọṅụṅụ nke Manchester.
Otu afọ mgbe Alonso nyeere Sunderland aka ịkwụsị De Gea'United United nwere ntaramahụhụ dị egwu na Old Trafford mgbe ha na - agba ọsọ na njedebe 2014 League Cup, ọ na - akwa enyi ya site na ịdebe vidiyo nke ebe ọ na - enweghị atụ na - akụ na Instagram na ozi egwu "Nwanne na-abaghị uru".
Marcos Alonso Nwa Akụkọ Akụkọ na -Ụdị Zodiac
Marcos Alonso bụ Capricorn ma nwee ụdị àgwà ndị a;
Ọrụ Marcos Alonso: Ikike, ịdọ aka ná ntị, njide onwe onye, ​​ezigbo ndị nlekọta.
Mmetụta Marcos Alonso: Mara ya nile, na-enweghị mgbaghara, na-emetụ onwe ya ala, na-atụ anya ihe kacha njọ.
Ihe Marcos Alonso nwere mmasị: Ezinụlọ, ọdịnala, egwu, ọnọdụ a kwadoro, ịrụ ọrụ mma.
Ihe Marcos Alonso achọghị: Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe ọ bụla. O nwere nsogbu dị egwu.
Daalụ maka ịgụ akwụkwọ anyị Marcos Alonso Akụkọ gbasara akụkọ eziokwu. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịdị mma. Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya n'isiokwu a, biko tinye okwu gị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị!
Bọchị gbanwee: Mee 27, 2020
Bọchị gbanwee: Mee 23, 2020
Bọchị gbanwee: Mee 22, 2020
Bọchị gbanwee: Mee 15, 2020